Sida Looga takhaluso Muck ka dib duufaanta - Ellicott Dredges
Mashruuca Bilowga ah
Hal mar, in kabadan 4 milyan oo galaan (1,514 milyan litir) oo ah bullaacad bullaacad ah oo lagu daweeyay galay Palm Bay Florida ee Turkiga Creek. Natiijo ahaan, Turkiga Creek wuxuu ku jiray heerar aad u sarreeya oo sun ah iyo nafaqooyin waxyeello leh.
Xilligii gu'ga ee 2017, kooxdii ka timid Gator Dredging waqtigooda badankood waxay xoogga saareen nadiifinta qashinka ee mar ay qabsadeen Turkiga Creek, iyaga oo ka saaray 236,000 yd3 (180,435 m3) of xuub, nitrogen, iyo fosfooraska wasaqowga.
Nooca Saxda ah ee Qalabka
Markaad ka shaqeyneyso mashruuc cabirka Turkey Creek, waxaad ubaahantahay qalab sax ah. Mashruucan, Ellicott Taxanaha 670 Dragon® dredge ayaa la xushay. 670 wuxuu awood uleeyahay inuu qodo qoto dheer oo ah 42 fuudh (13.0 m) wuxuuna ka koobanyahay bambo cabirkeedu badan yahay oo leh faras farabadan oo loo baahan yahay si loo dhameystiro shaqada baaxadan. Taxanaha 670 Dragon® dredge waxaa loo yaqaanaa aalad la isku halleyn karo, lagu kalsoonaan karo, iyo heer sare oo mashiin ah sumcad aad u wanaagsan.
hore The Nadiifinta Turkiga Creek waxay qaadatay dhawr bilood in la dhamaystiro, laakiin maadaama mashruucu gabagabo ku dhow yahay, dhamaan dhinacyada ay saameynta ku yeelatay nadiifinta bilowga waxay u maleynayeen in shaqadooda ay ku dhowdahay in la dhameystiro. Si kastaba ha noqotee, wax yar ma aysan ogeyn in masiibo dabiici ah ay ku dhowdahay geeska taas oo diidi doonta dhammaan shaqadooda iyo dadaalkooda hore.
Bishii Sebtembar 11, 2017, Hurricane Irma ayaa ku dhufatay Xeebta Gacanka ee Florida, taasoo sababtay wax weyn fatahaadda bulshada ku dhow dhow ee Turkiga Creek oo ku taal meel u dhow Gainesville. Waa markii labaad wax kayar laba sano, xuubkii waxyeelada lahaa ee hore uga jiray Turkiga Creek ayaa mar labaad soo dhex galay jidhka biyaha waana in la nadiifiyo. Markan, kooxda ka socota Gator Dredging ayaa la weydiistay inay ka saaraan xuubka dabiiciga ah ee hadda laga heli karo dekedda hoose ee ku yaal aagagga gacmeed iyo buuxinta godadka qoto dheer ee ku wareegsan agagaarka Turkiga Creek ee ay waxyeelada ka soo gaadhay duufaanta.
Laba ka mid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee kooxda soo food saaray Gator Dredge intii lagu guda jiray hawsha nadiifinta markan waxaa ka mid ahaa maareynta qalabka iyo xakameynta soo noqoshada biyaha. Taasi waa sababta oo ah, muddo ku dhow shan sano, saraakiisha maxalliga ah iyo kuwa gobolka ayaa iska indhatiray xaaladda qulqulka, saameynta muqdu ku yeelatay caafimaadka dadka deegaanka, iyo saameynta ay ku leedahay deegaanka ku xeeran.
Maxaa loo Kala Baxay?
Qodista ayaa aasaas u ah mashaariicda biyaha badankood waxayna wax ka qabataa baahiyo badan oo adduunka ah xagga dhaqaalaha, bulshada iyo deegaanka. Iyada oo in kabadan boqolkiiba 50 dadka dunida kunool ay kujiraan 125 mayl (201 km) oo gacan xeebeed aad uxun, meelaha jiifa ee hooseeya sida Turkey Creek waxay halis ugujiraan daadad aad uxoogan waxayna ubaahanyihiin horumarin joogto ah xeebta iyo agteeda.
Meelaha biyaha leh ee la mid ah Turkiga Creek waxay la kulmeen heerar biyaha kor u kaca ah oo ay sababaan duufaano xoog leh sida Hurricane Irma. Natiijooyinka waxaa ka mid ah burburka hanti ee ku dhacay boqolaal milkiileyaasha guryaha ah oo ay saameeyeen duufaano dilaaga ah, sidoo kale waxay saameyn ku yeelata deegaanka ku xeeran oo sababa malaayiin doolar waxyeello haddii aan laga daaweyn.
Marka waa maxay sababta quusin muhiim ah? Marka jir biyo la qoqobo, waxaa yaraada fursadda nabaad-guurka xeebta ee dhaca, iyo deegaankii ku hareeraysnaa ayaa dib loo soo celiyey. Noocyo dhowr ah oo faaruq ah ayaa ku jira sunta ka timaadda qulqulka wershadaha oo si weyn u saameeya tayada biyaha.
Marka nooc kasta oo qashin ah oo ka kooban wasaqda wasaqda ah laga saaro, caafimaadka guud ee jirka biyo ayaa fiicnaanaya.